Cielo Apartment kunye Private Outdoor Hot Spring - I-Airbnb
Cielo Apartment kunye Private Outdoor Hot Spring
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGlenn
Eli gumbi lisanda kulungiswa lamagumbi amabini likwindlu yokuhlambela yasentwasahlobo eshushu ukusuka koo-1930. Inegumbi lokuhlala elikhulu, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi eligcweleyo elineetafile zegranite kunye nebar yesidlo sakusasa, kunye nepatio yabucala yangaphandle enebhafu eshushu yeminerali yasentwasahlobo. Kumgama ohamba ngemizuzu emi-5 ukuya kwindawo ethengisa utywala, iigalari zobugcisa, iindawo zokutyela, igrosari kunye nokuhamba ecaleni kweRio Grande. UCielo uthetha isibhakabhaka ngeSpanish, esikhulu naluhlaza okwesibhakabhaka phezu kobu bunewunewu bokuhamba kwentwasahlobo eshushu.
Yonke into ekweli gumbi intsha kubandakanya ikhitshi elineetafile zegranite kunye nezixhobo zombane ezingenasici. Eyona nto ingcono kakhulu inegumbi lokuhlambela lamanzi leminerali ashushu langaphandle kunye nepatio.
Ngokuvuma ukubhukisha indawo yokuhlala eCielo Apartment, uyavuma ukuba (1) uya kube untywila kwimithombo eshushu ngomngcipheko wakho. kwaye (2) iindwendwe azivumelekanga ngokungqongqo ukuba zimeme okanye zingenise abantu abangezondwendwe kuloo propati ngaphandle kwemvume yangaphambili yomamkeli. Undwendwe luya kuba noxanduva lwesohlwayo se-$200 ngondwendwe ngalunye olungabhaliswanga.
Lo mhlaba uyinxalenye yeNkqubo ye#NMSafeCertified.
Nceda uqaphele umgaqo-nkqubo wengxolo wasekuhlaleni oqala ngeeyure ezizolileyo ngo-10pm.
Izimvo eziyi-1 297
Ukuba ndisedolophini, ndiza kudibana kwaye ndikubulise xa ndifika. Ukuba andikho kufutshane, kukho iphepha lemiyalelo elinayo yonke imithetho yendlu kuquka nenombolo yam yomnxeba onokuthi ufowunelwe kuyo xa unemibuzo.